Jabuuti iyo Somaliland oo kala Saxiixday Heshiis lagu Adkeynayo Ammaanka |
Xukuumadda Jabuuti ayaa heshiis iskaashi la saxiixatay maamulka Somailland, kaasoo ku saabsan sidii ay labada dhinac isaga kaashan lahaayeen ka hortagga isku gudbinta maandooriyaha, tahriibka iyo kooxaha argagaxiada ah.
Xubno ka kala socda Jabuuti iyo Somaliland ayaa heshiiskan saxiixday magaalada Lowya-cadde maalintii Arbacada ahayd ee lasoo dhaafay, sida ay ay baahisay wakaaladda wararka dalka Jabuuti.
Labada dhinac ayaa qoraya in la dhiso guddi wadajir ah oo la socda dhaqan-gelinta go’aannada heshiiska, kaasoo ah mid xoojinaya iskaashiga arrimaha ammaanka iyo la-dagaallanka argagixisannimada. Waxaa sidoo kale ay labada dhinac iska kaashan doonaan ka-hortagga tahriibka, iyadoo ganacsigana labada dhinacna laga dhigi doono mid xooggan.
Sidoo kale, wasiirka wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid lagu xoojinayo sidii looga hor-tegi lahaa dhibaatooyinka ka imaan kara isku-tallowga xuduudaha.